နေအိမ် » တိုက်ပွဲတွေ » Dragon Ball Z 2.4
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Dragon Ball Z 2.4
ဖေါ်ပြချက်: နဂါး Ball ကိုပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲများဗားရှင်း 2.4 သင်တို့အဘို့အစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေထည့်ပါ။ အခုတော့တစ်ဦးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို select လုပ်ပါနဲ့နောက်ဆုံးအောင်ပွဲအနိုင်ရဖို့အားလုံးကိုပြိုင်ဘက်ရိုက်နှက်!
ကစား: 60,464 tag ကို: နဂါးဘောလုံး, နဂါး Ball ကိုဂိမ်းများ, နဂါးဘောလုံး, နဂါးဘောလုံးအားကစားပြိုင်ပွဲ, ဘောလုံးဂိမ်း, goku, goku ဂိမ်း, နဂါးဘောလုံးကို z, သား goku, နဂါးဘောလုံးကိုတိုက်ပွဲများ
တဦးတည်းအပေါ်ကမ္ဘာခွက်ကို 2014 ခုနှစ်တစျခု
Mele ၌သင်တို့၏ပြိုင်ဘက်ရင်ဆိုင်ရ, ရမှတ်အများဆုံးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ပွဲအနိုင်ရသူကို။ ဒီနေရာမှာဒီဘောလုံးဂိမ်း၌သငျတကျိပ်တပါးသောကစားသမားတစ်ဦးအဖွဲ့သည်လိုအပ်ပေမယ်သာသငျသညျတစျခုကြပါဘူး။
ဘရာဇီးကမ္ဘာခွက်ကို 2014 ခုနှစ်, ဂိမ်း
ကမ္ဘာ့ဖလားအနည်းငယ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုပယ်သည် ... ကြွေးထုတ်ပစ်အနိုင်ရလျက်, ဘရာဇီးကမ္ဘာ့ဖလား 2014 ခုနှစ်, လာ. ကြည့် ရည်ရွယ်ချက် ... သင်တို့ရှိသမျှကာလ၏အကြီးမြတ်ဆုံးကစားသမားပါပဲသောလောကဓာတ်ကိုပြရန်, သင့်အစို့၏တန်ခိုးဆေးထိုး, ထိုသို့အဘို့အသွား! ရမှတ်တွေအများကြီးစုဆောင်းရန်, သငျသညျဟက်တာ
ကမ္ဘာ့ဖလား 2014 မှာစီရော်နယ်ဒိုနှင့်အတူအခမဲ့ကန် traning စို့။
ကမ္ဘာခွက်ကို 2014 ခုနှစ်တိုက်စစ်မှူး
သူကမ္ဘာဘောလုံးချန်ပီယံစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်, သင်၏နိုင်ငံ၏အဖွဲ့သည်ချန်ပီယံဖြစ်လာရမယ်! ထို့ကြောင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို select လုပ်ပါနှင့်အသက်ရှုမှားဘောလုံးဂိမ်းရဲ့ရှည်လျားအတန်းအားဖြင့်အောင်ပွဲဖို့ကဦးဆောင်။ တတ်နိုင်သမျှအများအပြားရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဂိုးသွင်း! ကံကောင်းပါစေ!
နဂါးဘောလုံးကို z စုံလင်သော hit
Songoku အုတ်ဝန်ခံခြင်းတန်ခိုးတော်ကိုသုံးကူညီပါ! ကစားရန်အာကာသ bar ကိုသုံးပါ။
နဂါး Ball ကိုထောင်စုနှစ် Kill, တစ်ရယ်စရာထောင်စုနှစ် Kill ဂိမ်း! ဒီအချိန်စိန်ခေါ်တန်ခိုးကိုပေမယ့်ခံနိုင်ရည်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ အခုအချိန်မှာစတင်သည်!
နေ့စဉ်ဂြိုဟ်ကြယ်ကြွေမြို့ထိမှန်သွားကြသည်သတင်းကိုဆည်းပူးခဲ့သည်! သင့်ရဲ့မစ်ရှင်သူတို့မြေပြင်ထိမပြုမီ Goku အကြယ်ကြွေတပ်များကိုကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်။